कसरी वजन लागि चयापचय गति गर्न? सुझाव र चाल, समीक्षा
खेल र फिटनेस, वजन
चयापचय - यो कुनै पनि जीवित जीव को मुख्य कार्य को छ। यो जीव रसायन प्रक्रियाहरू को एक किसिम को हुन्छन्। - शरीर मा पदार्थ को एक क्षय, साथै Assimilation को प्रक्रिया - पोषक को अवशोषण dissimilation को प्रक्रियाहरु: तिनीहरूले धेरै समूह मा functionally विभाजित गर्न सकिन्छ। वजन धेरै महिला, प्रयास खाना मात्र गर्न सक्छन् विशेष तयारी वजन लागि चयापचय गति रूपमा, तर पनि कुनै पनि तरिका मा, शरीर को यो कार्य प्रोत्साहन। यसलाई वजन लड्न सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका हो।
कसरी चयापचय गर्छ
धेरै वजन लागि चयापचय गति कसरी प्रश्न रुचि राख्नुहुन्छ? समीक्षा केही नियमहरू अनुपालनको वजन हुनुको सामना गर्न मदत गर्छ भनेर देखाउँछ। तर तपाईं आफ्नो सपना पूरा गर्न सुरु गर्नु अघि, तपाईं विचार खाली गर्नुपर्छ चयापचय के छ। dissimilation र Assimilation प्रक्रियाहरू को सामान्य चयापचय मा संतुलन छन्। तथापि, प्रायजसो, त्यहाँ केही उल्लंघन हो। तपाईं dissimilation को प्रक्रिया हावी सुरु भने, व्यक्ति वजन गर्न सुरु, तर यदि Assimilation - वजन बढाउनका।
कसरी वजन गर्न शरीर गरेको चयापचय गति र आफैलाई चोट छैन? यो प्रश्नको जवाफ हामी जो शरीर चयापचय विनियमित जान्नु आवश्यक छ। एक मस्तिष्क क्षेत्र - लागि यो hypothalamus छ। उहाँले धेरै आधारभूत कार्यहरु कार्य: एक भाग भण्डारण, निर्माण र चयापचय को restorative गुणहरू, र दोस्रो लागि जिम्मेवार छ - शरीर मा ऊर्जा उत्पादन को दर। तपाईं केवल एक भाग माथि टोन भने, व्यक्ति या त वजन वा प्राप्त वजन हराउछ।
चयापचय विकार मोटोपना वा anorexia गर्न सक्छ। त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन् पदार्थ को रिकभरी आदान प्रदान शरीर मा। तिनीहरूलाई केही चिकित्सकहरु द्वारा विकसित, र केही गरिएका छन् - लोक बुद्धि। त्यसैले, कसरी वजन लागि चयापचय गति गर्न? विशेषज्ञहरु को समीक्षा कुनै पनि अनियमितताहरु चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस् गर्नुपर्छ भनेर देखाउँछ। साँच्चै, केही अवस्थामा, विफलता कारण थाइरोइड ग्रन्थि को इनकार छ। यस्तो अवस्थामा तपाईं दबाइ उपचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ।
उनको स्वास्थ्य हानी छैन क्रममा, सुस्त वा को चयापचय गति अप चिकित्सकको पर्यवेक्षण अन्तर्गत हुनुपर्छ। साथै, यो केही विशेषज्ञ सल्लाह पालन गर्न आवश्यक छ।
त्यसैले हरेक स्त्रीको सपना घरमा वजन गर्न चयापचय गति, तपाईं बानी परिवर्तन सुरु गर्नुपर्छ। यस अतिरिक्त वजन हटाउन मदत गर्नेछ र स्वास्थ्य हानी छैन। सबै को पहिलो यो भोजन समाधान गर्न आवश्यक छ। यो सानो अंश, तर अक्सर हुनुपर्छ खान्छन्। यो दृष्टिकोण पाचन पर्चा निरन्तर काम गर्न बनाउँछ। यस मामला मा, शरीर सामान्य भन्दा धेरै बढी ऊर्जा expend हुनेछ। भिटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, बोसो र प्रोटीन: साथै, आहार सबै अङ्गहरू र प्रणाली सामान्य कामकाज को लागि आवश्यक हो कि सबै घटक समावेश गर्नुपर्छ। साथै, विशेषज्ञहरु सकेसम्म धेरै तरल खाने सल्लाह दिन्छौँ। यस मामला मा, प्राथमिकता कुनै पनि additives बिना पानी सफा गर्न दिइएको छ।
के खाद्य पदार्थ वजन लागि चयापचय बढाउने
आहार सन्तुलित हुनुपर्छ। मेनु हुन राम्रो। यो केवल क्यालोरी छैन गणना, तर पनि ती उत्पादनहरु अतिरिक्त वजन विरुद्ध लड्न योगदान कि चयन गर्न। त्यसैले, कसरी माथि 45 वर्ष पछि वजन लागि चयापचय गति गर्न? महिला लागि हप्ताको लागि मेनु मात्र होइन उत्पादन, तर पनि प्राथमिकताहरू फाइदाको दिनुपर्छ। तपाईं प्रोटिन मा धनी छन् कि खाद्य पदार्थ सुरु गर्नुपर्छ। यो कम बोसो डेयरी उत्पादन, दुबला माछा, समुद्री भोजन र दुबला मासु सबै प्रकारका समावेश गर्नुपर्छ।
माछा र तरकारी: पनि आहार मा वर्तमान बोसो हुनुपर्छ। कार्बोहाइड्रेट भूल छैन। तिनीहरूले बढी सम्भावना फल र तरकारी मा पाइन्छन्। विशेष गरी porridge मा कार्बोहाइड्रेट धेरै, रोटी गहुँको पीठो, pineapples र सिट्रस देखि गरे। साथै, तपाईंले यस्तो चकलेट, कफी, चिया रूपमा प्राकृतिक मसला र उत्तेजक, को मद्दतले चयापचय गति गर्न सक्छन्।
मालिश र व्यायाम
समस्या आहार छैन भने के र कसरी माथि वजन लागि चयापचय गति गर्न? यो शारीरिक गतिविधि वृद्धि गर्नुपर्छ। यो पनि चयापचय पुनर्स्थापना गर्न मद्दत गर्छ। यो हिड्ने चलिरहेको मदत संग गर्न सकिन्छ, वा विशेष प्रशिक्षण मार्फत dosed। केही महिला दैनिक घरेलू घरधन्दा एक ऊर्जावान प्रदर्शन मदत। विशेषज्ञहरु यस विधि रूपमा फिटनेस केन्द्र मा एक वर्ग रूपमा प्रभावकारी छ कि साबित गरेको छ।
तर पनि जोसिलो हुन छैन। डाक्टर पर्याप्त आराम र व्यायाम संयोजन गर्न सुझाव दिन्छौं। विशेष गरी महत्त्वपूर्ण राति एक स्वस्थ निद्रामा छ। अन्यथा हटाउन वजन काम गर्ने छैन। विशेषज्ञहरु निद्रामा को नियमित कमी भएको चयापचय slows कि पाएका छन्।
चयापचय सुधार अर्को तरिका हुन सक्छ। रोगनिरोधी मालिश undergo गर्नुपर्छ। यो प्रविधी लसीका र रक्त सुधार कि सिद्ध भएको छ। यो चयापचय सकारात्मक प्रभाव छ।
न्यानो पानी चिकित्सा - यो वजन लागि चयापचय गति कसरी प्रश्न गर्न अर्को जवाफ छ। चयापचय प्रक्रियाहरू पत्र, यो एक फिनिस सना र एक रूसी स्नान भ्रमण गर्न आवश्यक छ। गुप्त उच्च तापमान र बाफ को प्रभाव अन्तर्गत रक्त नली को एक विस्तार छ भन्ने तथ्यलाई मा निहित। फलस्वरूप, रगत धेरै छिटो भएको Tissues गर्न बग्छ। यो कक्षहरूको पोषण सुधार र toxins को सबै प्रकार को उन्मूलन accelerates। यो सुधार र चयापचय। तथापि, दिन थप एक पटक हरेक सात भन्दा कुनै हुनुपर्छ बाहिर यस्तो प्रक्रिया पूरा गर्न।
DOUCHES - शरीर मा चयापचय प्रक्रियाहरू सुधार गर्न अर्को तरिका हो। तिनीहरूले दैनिक स्वच्छता पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। यस को लागि यो पूरा, चिसो र तातो पानी प्रवाह वैकल्पिक गर्न आवश्यक छ शावर चिसो पानी।
थप तरल पदार्थ
चयापचय पुनर्स्थापना र वजन पानी सफा गर्न मद्दत गर्नेछ गुमाउन। र यो धेरै dieters को प्रतिक्रियाहरू द्वारा प्रमाणित, कल्पना छैन। किनभने सबै चयापचय प्रक्रियाहरु जलीय वातावरण मा ठ्याक्कै बाहिर छन्। यो तरल पदार्थ सेवन चयापचय गति मदत गर्छ यस कारण लागि हो। कारण यो एक व्यक्ति वजन गर्न थाल्छ।
यो पानी शरीर सफा गर्ने टिप्पण लायक छ। यो फोहोर लाग्छ र पाचन प्रणाली regulates। अक्सर सानो छ र तरल पदार्थ सेवन चयापचय र slags को संग्रह को प्राथमिक कारण हो। Nutritionists दिन को समयमा पानी दुई लिटर सम्म खाने सल्लाह दिन्छौँ। निस्सन्देह, केही लागि यो सजिलो छ। यो खातामा तपाईं पिउन पानी मात्र होइन राशि, तर पनि चिया, कफी र अन्य पेय, तरल सूप लाग्छ।
तनावपूर्ण अवस्थामा जोगिन
वैज्ञानिकहरू अनुसार, चयापचय त सजिलो छैन सुधार। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो - बाँकी र व्यायाम को मोड पालन गर्न, सही, खान र तनावपूर्ण परिस्थिति जोगिन र पाठ्यक्रम, स्नायु र मानसिक तनाव को। यो सुनौलो नियम छ। तनाव सबै प्रकारका केन्द्रीय स्नायु प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव, साथै शरीर मा चयापचय प्रक्रियाहरूको खराब प्रभाव छ भनेर नबिर्सनुहोस्।
साथै, धेरै स्वादिष्ट र सधैं उपयोगी खाना को एक ठूलो नम्बर प्रयोग गरेर, neuropsychiatric भीड संग संघर्ष गर्दै छन्। यसलाई एक निश्चित क्षण मोटोपना सक्छ छ। अचानक नसाहरू frays भने, यो टहलने लायक छ। ताजा हावा गर्न जोखिम पनि चयापचय प्रक्रियाहरू सकारात्मक प्रभाव छ भनेर याद गर्नुहोस्।
एक आहार मा बस्न छैन
मुख्य नियम - भोकभोकै पर्छन् छैन र गति चयापचय यसरी बस काम गर्ने छैनन् मा वजन मानिस वा महिला गुमाउन रूपमा, आहार सबै प्रकारका आफ्नो शरीर निकास छैन। हाम्रो शरीर सबै अङ्गहरू र प्रणाली को सामान्य कामकाज लागि ऊर्जा आवश्यक छ। चयापचय प्रक्रियाहरू सुधार गर्न उपवास लामो समयसम्म आवश्यक आहार त्याग्न छ।
आमूल आफ्नो दैनिक आहार कम, एक व्यक्ति खपत क्यालोरी को मात्रा कम गर्छ। यो आफूलाई जोगाउन आकस्मिक उपाय प्रयोग गर्न आफ्नो शरीर धक्का। अर्को शब्दमा, शरीर बोसो जम्मा गर्न सुरु, र यो एउटा त्वरित गति मा हुन्छ।
यो मुख्य नियम सम्झना गर्न लायक छ: औसत महिला लागि आहार अवधिमा खपत क्यालोरी को राशि 1200. भन्दा यो महत्त्वपूर्ण छ कम हुनु हुँदैन। कम केहि मात्र अल्पकालीन परिणाम प्रदान गर्न सक्छ। र यो सिर्फ सबै भन्दा राम्रो छ, र मा खराब - धारिलो वजन र स्वास्थ्य क्षति।
त्यसैले खाना को ठूलो रकम खाने द्वारा वजन सम्म कसरी चयापचय गति गर्न, यो, तपाईं केही अवस्था पालना हुनु पर्छ। यो अर्को नियम छ। तपाईं सीतनिद्रा अघि भालु जस्तै ब्लेड अप लोड गर्नुपर्छ। किन गर्न सक्नुहुन्न? पहिले, एक व्यक्ति खाना को एक ठूलो रकम खाने आफ्नो पेट सुत्छन् गर्न सक्षम छ। फलस्वरूप, शरीर प्रत्येक समय थप खाना माग हुनेछ। सामान्य सर्विंग्स एक व्यक्ति भोक महसुस हुनेछ।
दोस्रो, खान सारा दिन को लागि काम गर्ने छैन। कुनै पनि अवस्थामा, भोक को भावना केही बिन्दुमा आउनेछ। Nutritionists प्राय तर सानो अंश मा खान सुझाव दिन्छौं। भोजन को संख्या वृद्धि, एक व्यक्ति आफ्नो मात्रा कम गर्छ। यस मामला मा, पेट सुत्छन् छैन, तर त्यसको विपरीत, कम हुनेछ। यस मामला मा, त्यहाँ पनि केही मापदण्ड छन्। पेट को लागि आदर्श भाग जसको वजन 200-250 ग्राम भन्दा बढी छैन हो। यो सबै विकास निर्भर गर्दछ।
चयापचय को सुधार को लागि तयारी
तपाईं नियम र शक्ति आदर गर्न चाहनुहुन्छ भने, कसरी वजन लागि चयापचय गति गर्न? तयारी लगभग कुनै पनि औषधि पसल मा चयापचय, बेच आज सुधार गर्न अभिप्रेरित। प्रभावकारी द्वारा, खरीददारों अनुसार, धन हो:
"एल-thyroxine"। यस दबाइ थायरयड ग्रंथि बढावा।
पदार्थ-उत्तेजक। यी amphetamine, कैफीन र यति मा समावेश गर्नुहोस्।
Anabolic स्टेरयड लागूपदार्थ। तिनीहरूले अक्सर चाँडै र सजिलै मांसपेशी निर्माण गर्न चाहनेहरूको ती द्वारा प्रयोग गरिन्छ।
उदाहरणका लागि हर्मोन र अन्य पदार्थ, क्रोमियम।
उत्पादन र तिनीहरूको विशेषताहरू: कसरी वजन लागि चयापचय गति गर्न
सबै ड्रग्स र सक्रिय सामाग्री, माथि सूचीबद्ध जुन, त्यहाँ साइड इफेक्ट र contraindications छन्। सबै को पहिलो, सबै उत्तेजक दबाइ निर्भरता हुन सक्छ। anabolic स्टेरयड सन्दर्भमा, तिनीहरूले हर्मोन उल्लङ्घन गर्छ। विशेष महिला को लागि यी steroidal एजेन्ट खतरनाक।
"एल-thyroxine" अहानिकारक छैनन्। यस दबाइ को प्रयोग hyperthyroidism सक्छ। अक्सर यो एक उच्च उल्लंघन irritability, अनिद्रा, वृद्धि डराएको र छिटो धडकन सँगसँगै छ। त्यसैले, कसरी चयापचय गति गर्न? आहार चक्की यस्तो योजना छैन उपयुक्त छ। विशेषज्ञहरु हर्बल औषधी प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छौं।
मदत गर्न बिरुवाहरु
त्यहाँ शरीर मा चयापचय प्रक्रियाहरू गति गर्न सक्छन् कि धेरै बिरुवाहरु छन्। हालै, तिनीहरूलाई आधारित उपकरण धेरै लोकप्रिय बनेका छन्। यस्तो बोट बीचमा समावेश:
सोया। यो धीरज सुधार र मांसपेशी तन्तु को गतिविधि बढ्छ।
Schisandra। यो बोट मुड सुधार, र प्रदर्शन सुधार।
Eleutherococcus। यो बोट आधारित लागूऔषधको प्रयोग बोसो ऊतक को ओक्सीकरण को प्रक्रिया अघि बढाउने गर्न सक्नुहुन्छ।
Ginseng। त्यसैले माथि जो कोहीले प्रयोग पनि हर्बल तयारी अघि चिकित्सा सल्लाह खोज्नुपर्छ सक्नुहुन्छ वजन लोक उपचार लागि चयापचय गति कसरी। आखिर, तिनीहरूलाई केही contraindications छ। उदाहरणका लागि, ginseng। यो बोट को चयापचय गति सक्षम छ, तर एकै समयमा भोक बढ्छ। रक्तचाप मा साथै, ginseng प्रभाव।
Echinacea purpurea। मात्र आफ्नो चयापचय accelerates, तर पनि प्रतिरक्षा प्रणाली बढावा।
भिटामिन र खनिज परिसर
वजन सम्म कसरी चयापचय गति गर्न? ट्याब्लेटको लाभ उठाउन सक्छौं। निस्सन्देह, यदि यो भिटामिन र खनिज को एक जटिल छ। Nutritionists र वैज्ञानिकहरू यी लागूपदार्थ शरीर मा चयापचय प्रक्रियाहरू गति गर्न सक्छन् भन्ने निष्कर्षमा छ। यहाँ सबैभन्दा प्रभावकारी र लोकप्रिय को सूची छ:
अल्फा Vita। भिटामिन र खनिज को जटिल छैन केवल चयापचय गति, तर पनि शरीर भित्र सबै कार्यहरु पुनर्स्थापना गर्न मद्दत गर्छ।
Vita Zeolite। यो निरूपण, toxins को शरीर सफा गर्न साथै मुक्त कण भारी धातु फिर्ता गर्न अनुमति दिन्छ। र यो, बारी मा, माथि चयापचय गति र सेलुलर स्तर मा दक्षता शरीर वृद्धि।
Vita न्यूनतम। तयारीको खनिज, भिटामिन र एंटीओक्सिडेंट को एक महत्वपूर्ण राशि समावेश गर्दछ। यो लामो यस्तो पदार्थ प्रयोग सबै गतिविधि बढ्ने सिद्ध गरिएको छ चयापचय प्रक्रियाहरू। विशेष यस्तो medicaments dieting समयमा सान्दर्भिक छन्।
Vita खनिज। यस दबाइ भिटामिन सी र ट्रेस तत्व शरीर लागि आवश्यक धेरै भाग रूपमा। दबाइ एक निम्त्याउँछ कमी जो सबै घटक को घाटा, अप गर्न अनुमति दिन्छ ढिलो चयापचय। यस्तो परिसर अत्यधिक व्यायाम समयमा उपयोगी छन्। दबाइ समग्र शरीर धीरज बढाउन सक्छ।
Vita हे 2। कसरी 45 पछि वजन गर्न चयापचय गति जान्न चाहनुहुन्छ? तपाईं विधिहरू विभिन्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ: लोड वृद्धि गर्न शक्ति पत्र, साथै चक्की गर्न Resort गर्न। धेरै परिपक्व महिला र पुरुष त्यस्तो Vita हे2रूपमा हर्बल उत्पादनहरू र भिटामिन परिसर, प्रयोग गर्न सबै भन्दा राम्रो छ भन्ने विश्वास गर्छन्। यस्तो medicaments कारण अक्सिजन उत्पादन को आणविक स्तरमा वृद्धि पदार्थ को उच्च सामग्री, चयापचय बढाउने।
मोनो Oxi। उहाँले एक भारी मनोवैज्ञानिक बोझ, भारी शारीरिक श्रम पछि वा रोग पछि स्वास्थ्यलाभ गर्नु, केवल अपरिहार्य छ।
परम्परागत चिकित्सा को व्यञ्जनहरु
म जडीबुटी विभिन्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र कसरी वजन लागि चयापचय गति गर्न? दिन महिलाहरु प्रत्येक मेनु लागि विभिन्न हर्बल पेय समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। वैकल्पिक चिकित्सा को खुत्रुके मा गति चयापचय गर्न व्यञ्जनहरु भरिएको छ। यहाँ सबैभन्दा प्रभावकारी को सूची छ:
यस पेय तयार नितम्ब को बराबर अनुपात, चोट फल र नागफनी र कालो currants को फूल मा मिश्रण गर्न आवश्यक छ। परिणामस्वरूप मिश्रण को एक चम्मच नियमित चिया रूपमा तातो पानी र रक्सी खींचना संग भर्न गर्नुपर्छ। समाप्त पेय प्रयोग गर्न मात्र तातो सिफारिस गरिएको छ। तपाईं चाहनुहुन्छ भने जलसेक, तपाईं एक सानो मह थप्न सक्नुहुन्छ। दिन को समयमा पाँच पटक एक गिलास माथि हुनुपर्छ पेय लिनुहोस्।
पूर्ण nettle रस को चयापचय गति। यो राम्रो बोट को ताजा पात प्रयोग गर्न गर्न। तिनीहरूले एक मासु Grinder मार्फत पारित गर्न सकिन्छ, र त्यसपछि cheesecloth मार्फत squeeze। nettle रस दिनमा तीन पटक एक चमचा मा खपत गर्नुपर्छ।
रस को मिश्रण चयापचय गति गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक पेय तयार धेरै सरल छ। nettle को रस, स्याउ को रस, गाजर को रस र पालुङ्गो खाना पकाउनु ताजा पात Mince र तिनीहरूलाई squeeze सुरु गर्न। अब, यो घटक मिश्रित गर्न। मुख्य कुरा - अनुपात आदर। एक गहिरो कन्टेनर मा nettle रस एक गिलास, गाजर को रस को 2/3 कप, साढे कप स्याउको रस र पालुङ्गो रस जडान गर्न आवश्यक छ। तपाईं दिनमा पाँच पटक सम्म पिउन आवश्यक रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्। एक उदाहरणीय औषधिको खुराक साढे कप छ।
अब तपाईं प्रयोग गर्न सकिन्छ कसरी वजन चक्की र लागि कुनै पनि योजना को लागूपदार्थ लागि चयापचय गति थाहा छ। दुर्भाग्यवश, रिकभरी र बढाउने चयापचय - एक जटिल प्रक्रिया। यो समय र प्रयास को एक धेरै लिन्छ। आखिर, यी प्रक्रियाहरू उल्लङ्घनको एक दिन भित्र हुन्छ। को चयापचय गति गर्न, यो एक एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यक छ। दुर्भाग्यवश, माथि वर्णन परिणाम छैन नियमहरूमा सबै नियालेर बिना केही खाद्य पदार्थ वा लागूपदार्थ खाने। त्यसैले, तपाईं लगातार र रोगी हुनुपर्छ।
एक सरल वजन, वजन वा सोडा प्रयोग गरेर गुमाउन तरिका
वजन सजिलै! आहार वेलेरिया
दुबला शरीर लाभ। घर मा वजन खोने
मानिसहरू लागि सिफारिस निकायको सुकाउने लागि मेनु के हो?
घर मा कार्डियो। कार्डियो मा नाडी को मूल्य
प्रभावकारी र धेरै उपयोगी थीस्ल तेल पातलो
उत्पादन शारीरिक मात्रा को सूचकांक
औषधि 'Encephabol'। निर्देशन
बाल विकास को लागि सबै भन्दा राम्रो स्याम्पु: दर, सुविधा र समीक्षा
Chatkaew हिल होटल Residence3होटल (पटाया): फोटो र समीक्षा
एक छेपारो रंग परिवर्तन जस्तै, र के यो निर्भर गर्छ?
पासपोर्ट को हानि को मामला, के गर्न
ध्रुवीय ब्वाँसो: वर्णन, वासस्थानमा, फोटो
मा महिला बाँझोपन: कारणहरू र उपचार
पदक "सैन्य वाहकका लागि"। सैन्य समाघात ब्रदरहुड
मिसिन को गति कसरी स्विच गर्न? शुरुआती मोटर चालकहरुलाई लागि सुझाव
जूलिया Mikhalchik: जीवनी र क्यारियर